Ngaphezulu kwe-20000 yeemitha zesikwere zomhlaba, phakathi kwayo, i-8000 yeemitha zesikwere, ngaphezulu kwe-150 iinjineli ezifanelekileyo kunye nabasebenzi, ngenxa yoko sinokuqiniseka kuphuhliso lwethu loyilo.
Emva kweminyaka engaphezu kweshumi yophuhliso oluqhubekayo kunye nezinto ezintsha, i-Kangrun Sanitary Wares iye yaba ngumvelisi ophambili kunye nodumileyo wehlabathi wezinto ezicocekileyo kunye neemveliso zeshawari zangaphandle e China.
Kwicandelo lezinto zococeko, iiKangrun Sanitary Wares ziye zaqatshelwa kwaye zanconywa kumazwe amaninzi aphesheya ngomgangatho ophezulu kunye nenkonzo elungileyo, kwaye yamisela itekhnoloji yayo ekhokelayo kunye nezibonelelo ezithile zohlobo. Ngokukodwa kwimveliso yeshawari yangaphandle, i-Kangrun Sanitary Wares ithathe inxaxheba enkulu kwintengiso eYurophu naseMelika, kwaye iye yaba yeyona nto ithengiswa kakhulu kwishower yelanga kwimarike yaseYurophu naseMelika.
I-Wenzhou Kangrun Sanitary Wares Co., Ltd. igxile kuphando nakuphuhliso, imveliso kunye nokuthengiswa kwempahla yococeko kunye neemveliso zekholamu yeshawari yangaphandle. Umgca wemveliso ugubungela iimpompo, iishawa, izixhobo zangasese kunye nezinye izinto, kunye neekholamu zeshawari zangaphandle.
Izicelo zibandakanya ukuhonjiswa kwekhaya, ulwakhiwo, ngaphandle kunye nezinye iinkalo ezininzi. Uninzi lweemveliso kunye neetekhnoloji zifumene amalungelo awodwa omenzi wechiza esizwe, kwaye ziye zaqinisekiswa yi-SGS, i-CE kunye neenkampani ezininzi zesatifikethi somntu wesithathu.
Ukujonga phambili kwikamva, i-Kangrun Sanres Wares iya kuhambelana nemveliso eqhubekayo njengesicwangciso sayo sophuhliso, yomeleza uqeqesho lwabasebenzi, ulawulo lwezinto ezintsha kunye nokukhula kwabasebenzi njengeyona nto iphambili kwinkampani yethu, kwaye izama ukuba sisisombululo sesicelo esiphambili ebaleni. yeempahla zococeko kunye neemveliso zekholamu yeshawari yangaphandle.
Ukusukela oko kwasekwa iimpahla zangasese zeKangrun kwi2008, ubungakanani beqela liye lakhula ngokuthe ngcembe, umgangatho wabasebenzi uye waphuculwa ngokuqhubekekayo, kwaye ulwakhiwo lweqela sele lukhule ngakumbi. Umzi-mveliso ugubungela ummandla ongaphezulu kweemitha zesikwere ezingama-20,000, kwaye indawo yokusebenzela ibandakanya indawo ye-8,000 yeemitha zesikwere. Ukusukela nge-2018, ingeniso ikhule ngokukhawuleza kwaye ibeka rhoqo iirekhodi ezintsha. Inkcubeko yokudibana "yempilo" kunye "nokondla" njengoko undoqo uqhuba kuyo yonke inkqubo yophuhliso yeKangrun, kwaye zonke izinto ezinempumelelo zinxulumene kakhulu nayo.
1) Inkqubo yezezimvo
Umxholo ongundoqo: imveliso kuqala, pragmatic, ezintsha, kugxilwe
Umbono wenkampani: uphuhliso olusempilweni lweshishini, intlalontle ukutyebisa uluntu
2) Iimpawu eziphambili
Imveliso yokuqala: ukuqinisekisa umgangatho wemveliso, ukuhlonipha iimfuno zabathengi
02.Ukulinga ukwenza izinto ezintsha: naka ingqalelo kwimveliso entsha, landela imeko yeThe Times, wenze indlela yolawulo entsha
03.Uthobekile emhlabeni: Inyathelo elinye ngexesha, yoyisa ubunzima, ulumkele injongo ephezulu
05 Jonga kwikamva: Yiba nesicwangciso esicacileyo seenjongo, gxila kwindlela yophuhliso lwexesha elizayo
Iimbalasane kunye namabhaso
Iqale njengeshishini elincinci elinabantu abathathu, ikakhulu egxile kwintengiso.
Iphuhlise yaba yinkampani yabantu abalishumi kwaye inendawo yayo yemveliso. Yasekwa i-Ningbo Sales Branch, i-Ningbo Cyen Sanitary Ware Co., Ltd.
Isikali saqhubeka sanda, inani labasebenzi benkampani lafikelela kubantu abangama-50, kwaye indawo yokusebenzela yayiyimitha ezili-1 000.
Yabizwa ngokusemthethweni yaza yabhaliswa njenge Wenzhou Kangrun Sanitary Wares Co., Ltd.
Isikali sikamasifundisane sandiswa kwakhona, safikelela kwizikwere ezingama-2000
Uluhlu lweenkampani zeemveliso zekholamu yokuhlamba zifikelele ngaphezulu kweshumi, kwaye impumelelo yenkampani inyuse kakhulu isabelo sethu sentengiso.
Inani labasebenzi benkampani lifikelele ngaphezulu kwabantu abangama-150.
Umzi-mveliso wafudukela kwindawo entsha, egubungela indawo engaphezulu kwe-20,000 yeemitha zesikwere, kunye neworkshop yeemitha zesikwere ezingama-8,000.
Sithathe inxaxheba e-United States, eMexico zimpahla zangasese kunye neemveliso yangaphandle umboniso ngo-2018.
Sithathe inxaxheba kwiZinto zeMidlalo zeHlabathi, iZinto zokuMisa eKampini kunye neMiboniso yoBomi baseGadini eCologne, eJamani
Isikali sokuthengisa senkampani siphantse sibe zizigidi ezili-100, kwaye inkampani yaququzelela ulwakhiwo lweqela kwisixeko saseSanya, eHainan.
Siza kuqhubeka nokuqhubela phambili, siqhubeke nokugqobhoza.
Itekhnoloji yokuvelisa: Inkampani yethu inembali yeminyaka eli-13, ivelise umgca wemveliso ogqityiweyo kunye nenkqubo yemveliso.
Amalungelo awodwa omenzi wechiza: Iimveliso zethu zinelungelo elilodwa lomenzi.
Amava: Inkampani yethu iqhuba intsebenziswano kunye nokurhweba kwiiprojekthi ngaphezulu kweminyaka elishumi, enamava atyebileyo kwaye yaziwa ngokubanzi.
Izatifikethi: SGS, CE, WRAS, COC, TUV, njl.
Ukuqinisekisa umgangatho: Uvavanyo lokuvuza kwamanzi oluyi-100%, olunemithombo yobonelelo esemgangathweni ophezulu, i-100% yokujonga umphezulu.
Ukubonelela ngenkxaso: ukugqitywa kwenkxaso yobuchwephesha kunye nesikhokelo kwimveliso emva kokuthengisa.
Ikhonkco lemveliso yala maxesha: indawo yokusebenzela ehambele phambili, kubandakanya indawo yendibano, indawo yokuhlola, indawo yokupakisha, indawo yemveliso egqityiweyo, njl.